Dowladda Federalka oo la sheegay inay ka laabatay dacwaddii Muranka Xuduud-baddeedka ee kala dhexeeyey Kenya – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
On Jun 30, 2015 Last updated Jun 30, 2015
Wasiirka Arrimaha Dibedda ka ah dalka Kenya, Amina Mohamed oo ayaa sheegtay inay Dowladda Somalia oggolaatay inay xaal-mastuur ku dhamaystaan muranka dhinaca Xuduud-baddeedka ee horey loogu gudbiyey Maxkamadda Caalamiga ee Caddaaladda (The International Court of Justice) oo loo soo gaabiyo ICJ .
Amina Mohamed oo la hadashay Mudanayaasha Barlamaanka Kenya ayey sheegtay inay rajeynayso inay labada dowladooda ka heshiiyaan dacwadaasi muddada dheer soo jiitamaysay.
“Waxaan Dowladda Federalka Somalia ka helnay ballanqaad ku aadan inay ka laabteen Kiiskii ay ku buuxiyeen magaalladda New York ee naga dhanka ah” ayey tiri Wasiirka Arrimaha Dibedda ka ah dalka Kenya oo intaasi ku dartay inay Dowladda Somalia doonayso inay labada dal si gaar ah uga xaajoodaan arrimaha Xuduud-baddeedka.
Dowladda Somalia ayaa waxay horey ashtako u gudbisay Maxkamadda Caalamiga ee Caddaaladda ICJ oo ku aadan muranka dhinaca Xuduud-baddeedka la isku haysto oo ku yaalla Badweynta Hindiya, lana sheegay inay ka buuxaan kaydadka Shidaalka iyo Gaaska Dabiiciga.
Dowladaha Somalia iyo Kenya ayaa horey ugu heshiin waayey Xuquuqda Sahminta Shidaalka iyo Gaaska Dabiiciga iyo macaashka laga heli doono Shidaalka.
Barlamaanka Dowladda Federalka Somalia ayaa horey gaashaanka ugu dhuftay Heshiis Is-faham oo horey loola galay Dowladda Kenya, kuna aadanaa xuduud-baddeedka sida ku cad Sharciga Baddaha ee Convention on the Law of Sea (UNCLOS).
Sannadkii 2012-kii, Dowladda Kenya waxaa lagu eedeeyey inay si sharci-darro ah kula heshiisay Shirkadaha Shidaalka ee TOTAL iyo ENI inay shidaal iyo gaas ka baaraan xuduud-baddeedka Somalia, inkastoo ay Kenya beenisay eedeymahaasi.
Si kastaba ha ahaatee, Kenya waxay sheegtay inay 8 goobood oo cusub oo ka baxsan Xeebaha ay ka heleen Kaydad Shidaal, inkastoo mid ka mid ah goobahaasi uu ku yaall goobaha lagu murunsan yahay milkiyadeeda.
Diplomaasi eedeyn iyo talo u jeediyey Madaxweynaha Dowladda Federalka Somalia